Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho – Kalfadhi
Waxaa maanta lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaana shir guddoomin doona Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Ajandaha Kulanka maanta ee kulanka Golaha Shacabka ayaa ah Akhrinta 2aad ee Hindise Sharciyeedka Duulista Hawada ee Rayidka iyo Akhrinta 3aad ee Xisaab Xirka Sanadka 2017 sida lagu shaaciyay fariin lala wadaagay Xubnaha Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya.
Xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya in kulanka Golaha shacabka uu maanta furmaya, iyadoona xildhibaanada lagu amray in aysan ka maqnaan Karin kulanka.
Ammaanka Xarunta Golaha Shacabka ayaa saaka Aad loo adkeeyay, iyadoo la dhigay Ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya.Qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa la xirey.
Maalin ka hor ayaa Xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku ansixiyeen Sharciga Saxaafadda oo dib u Eegis lagu sameeyay.
Xildhibaan Cabdi Cali "Wasiirkii isticmaala lacag aan miisaaniyadda ku jirin waa tuug"